आमाको ग र्भमै छँदा यि बालिकाको जिवनमा घट्यो विश्वकै अनौठो घ'टना, यसरी शरिर बाहिरै मुटु -
[ April 11, 2021 ] हँसाएर मा’र्ने भो को बाहिरियो भित्री कुरा, यस्तो सम्म हुदो रैछ (भिडियो सहित) समाचार
[ April 11, 2021 ] आज मिति २०७७ साल चैत्र २९ गते आइतबारको राशिफल हे’र्नुहोस् राशिफल
[ April 10, 2021 ] हरिहर कै अगाडी नीतालाई तपाईको प्रेमी को हो भनेर प्रश्न गरेपछि, भावुक भए हरिहर (भिडियो हेर्नु’होस) समाचार
[ April 10, 2021 ] कल्पना र अलिफको बन्यो नया जोडी , कल्पनाले मलाई तिमि मन पर्छ भनेपछि…(भिडियो सहित) समाचार
[ April 10, 2021 ] २४ बर्षिय छोरो धन कमाउन कोरिया गएको तर बाकसमा फ’र्कियो, रुदा रुदै बे’होस भइन् बहिनी समाचार
Homeसमाचारआमाको ग र्भमै छँदा यि बालिकाको जिवनमा घट्यो विश्वकै अनौठो घ’टना, यसरी शरिर बाहिरै मुटु
आमाको ग र्भमै छँदा यि बालिकाको जिवनमा घट्यो विश्वकै अनौठो घ’टना, यसरी शरिर बाहिरै मुटु
April 2, 2021 admin समाचार 767
अमेरिकामा बस्ने एउटी बालिका एकदम दु’र्लभ समस्याबाट गुज्रिरहेकी छन् । विरसविया गोन्चरोभा नामकी यस बालिकाको पेन्टा’लोगी अफ कन्ट्रोल भनिने उनी आमाको ग र्भ मै छँदा उनका मांस’पेशीहरु गलत तरिकाले विकसित भए । यस अवस्था’का कारण गोन्चरोभाले कुनै पी’डा महसुस भने भएको छैन । यसको कारणले गर्दा उसको मुटु शरिर बाहि’र नै देखिन्छ ।
उनको मुटुमा प्वा’ल पनि छ। गोन्चारोभा यस्तो अवस्थाका कारण प्रायः अस्पतालमा समय बि’ताउनु पर्छ। २०२० को सुरुमा उनको अक्सिजनको स्तर एकदम छिटो तल झर्न थाल्यो, त्यसपछि उनलाई आपतकालीन कोठामा लगियो र अर्को दुई हप्तामा अस्पतालमा समय बि’ताएपछि गोन्चारोभाको अक्सिजनको स्तर सा’मान्यमा फर्कियो।
दारी २०१५मा रूस बाट अमेरिका आउने नि’र्णय गरेका छन् । उनलाई आशा छ कि उनी अमेरिकामा छोरीको शल्यक्रिया गर्न सक्षम हुनेछन् । ताकी छोरीको मुटुमा भएको प्वा’लको पनि उपचार गर्न सकियोस् । यद्यपि गोन्च’रोभाको उच्च रक्तचापका कारण उसको फोक्सोका धमनीहरू प्रभावित छन्, त्यसैले यो शल्य’क्रिया पनि सम्भव भएको छैन।
गोन्च’रोभा भन्छन कि कहिलेकाँही अक्सिजनको मात्रा यत्ति कम हुन्छ कि उनीहरूलाई चक्कर आउन लाग्छ । तर यसको बा’वजुद उनी सक्रिय हुन मन पराउँछिन् र उनी आफ्ना साथीहरूसँग नाच्न र गाउन मन पराउँछिन्। यद्यपि कोरोना अवधि’का कारण उनी यस वर्ष आफ्ना साथीहरूसँग बढी स’मय दिन सकेकी छैनिन।
गोन्चरोभा पनि सो’शल मिडियामा धेरै सक्रिय छिन र उनी आफ्नी आमासँग फोटोहरू साझे’दारी गर्छिन । गोन्चरोभा इन्स्टाग्राममा धेरै सक’रात्मक सन्देशहरू प्राप्त गर्दा आनन्द लागेको बताउँछिन् । इताजाखबरबाट
नौ महिनाकी छाेरी छोडेर आमा भा’गिन्, घरमा पुग्दा छाेरीको रुवा’बासी (भिडियो सहित)
आर्कै संग भागेर दुई महिना पछि घर फर्किदा …(भिडियो सहित)
‘मालिङ्गो’ बोलको गीतमा राजेश हमालसँग प्रचण्डकी नातिनीको अभिनय(भिडियो हेर्नुहोस्)
November 20, 2020 admin समाचार 3211
गायिका स्मीता दाहालको नयाँ ‘श्रव्य दृश्य’ स’ङ्ग्रह सा’र्वजनिक भएको छ । आफैँले गाएको गीतको म्युजिक भिडियोमा नेकपा अध्य’क्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ की नातिनी स्मीता महाना’यक राजेश हमालको जो’डीका रुपमा देखिनुभएको छ । स्मीतार लोकप्रिय स’र्जक
November 3, 2020 admin समाचार 4256
कोरोना भाइरसको संक्र’मणले महा’मारीको रुप लिएपछि यसबाट बच्न अनेक प्रकारका बचाव उ’पायहरु अप’नाउन थालिएको छ । तर यी सबै उपाय निकै म’हंगो रहने गरेका छन् । यो आम मानिसका लागी स’हज बन्दैन । तर यस
January 3, 2021 admin समाचार 2757
कल्पना र अलिफको बन्यो नया जोडी , कल्पनाले मलाई तिमि मन पर्छ भनेपछि…(भिडियो सहित)
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (160347)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (155112)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (154602)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (153870)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (153674)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (151494)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (151471)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (149780)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (145318)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145076)